Wardiilee dhangii dalgeessaatiin maxxansuu
Wardii maxxansuuf dirqaalaalee haasoo baay'ee Argi - Durargii Cita Fuulaa jala jiran qabda. Hammangaa man'eelee fuula mara irratti maxxansaman qindeessuuf sararoota daangessaa harkisi.
Dhangii dalgeessaatiin maxxansuuf,akka armaan gadiitti itti fufi:
Dhangii - Fuulaa filadhu.
Ajajni yoo wardiin dhorki barreessuu banaa ta'uun yoo banamee ture hin mul'atu.Haala kanaan,sajoo Faayilii gulaali kabala Durtiiirraa cuqaasi.
Caancala Fuula filadhu.Dhangii waraqaa Dalgeessa filadhuutii TOLE cuqaasi.
Faayilii - Maxxansifili.Qaaqa Maxxansi argita.
Ooftuu maxxansaa fi sirna dalagaa irratti hundaa'uudhaan, maxxansaa kee gara dalgeessaatti dhangeessuuf qabduu Amaloota cuqaasuun barbaachisaa ta'uu danda'a.
Qaaqa Maxxansi keessatti mataduree Maxxansi jalatti, wardiilee maxxansamuuf jedhan filadhu:
Wardiilee hunda -Wardiileen hundi ni maxxansamu.
Wardiilee filataman - Wardiilee filataman qofatu maxxansama. Man'eeleen maqaawwan isaanii (jala caancaloota wardii irra) filataman ni maxxansamu. Yemmuu maqaa wardii cuqaastu AjajaCtrl gad qabuudhaan filannoo kana jijjiiruu dandeessa.
Man'eewwan filataman - Man'eewwan filataman marti ni maxxanfamu.
Fuulota mara - Fuulota bu'aa ta'an mara maxxansi.
Fuulota - fuulota maxxansamuuf jedhan galchi. Fuulotaaf wardii jalqabaa irraa kaasees lakkoofsi ni kennama. Yoo Durargii Citaa Fuulaa keessatti akka Wardii1 fuulota 4 irratti maxxansamu argitee fi fuulota jalqabaa lamaan kan Wardii2 maxxansuu barbaadde, asitti 5-6 galchi.
Yoo Dhangeessuu - Hammangaawwan maxxansuu jalatti hammangaawwan maxxansaa tokko ykn ol qindeessitee jiraatte, qabiyyeewwan hammangaawwan kunneenii qofatu maxxansama.
Hammangaa maxxansuu wardii irratti qindeessi
Title is: Wardiilee dhangii dalgeessaatiin maxxansuu